Galaxy tab 10.1(P7500)နဲ့ဖုန်းကောပြောရအောင် ~ Free Mobile Sharing
Galaxy tab 10.1(P7500)နဲ့ဖုန်းကောပြောရအောင်
1:21 AM Android Tutorials No comments
Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500 ICS 4.0.4 ကို sim ကတ်ထည့်ရပေမဲ့ဖုန်းပြောလို.မရတာသိကြမှာပါ။
ဘာတွေလိုမလဲဆိုရင်တော့သင့်ရဲ.tab (P7500)ဟာ CWM တင်ပြီးသားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။အဲဒီအဆင့်တော့ကျော်လိုက်ပြီနော်။အောက်က ဟာလေး၂ခုအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ--
မစခင်မှာထုံးစံတိုင်း ယူစရာရှိတာတွေ ယူထားလိုက်ပါ(backups)
ဒေါင်းလို.ရလာတဲ.ဖိုင်၂ခုကို tab ရဲ internal memory ထဲထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။
Tab မှ power key နဲ. volume up key(ပါဝါခလုပ်နဲ.ကပ်လျက်)ကိုတွဲနှိပ်ထားပါ။Recovery Mode icon နဲ. Download icon ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။Recovery Mode icon ဘက်ကို Volume up နဲ.ရွှေ.လိုက်ပြီး Volume down နဲ. Recovery ၀င်လိုက်ပါ။
ထုံးစံအတိုင်းInstall ZIP from SD card>Choose ZIP from SD card ဆိုပြီးဒေါင်းထားတဲ.
ဖိုင်၂ခုလုံးကို Installလုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ Wipe cache partition လုပ်ပါ။နောက် Advanced > Wipe Dalvik cache လုပ်ပြီးရင်တော့ reboot system now ပေါ့ ။ ဟော ဖုန်းပြောလို.ရပါပြီ သတိတော့ထားဦးနော် ဟိဟိ ဖုန်းပြောရင်းအပြားကြီးလွတ်ကျမယ်။
လိုရမယ်ရ CWM= Download
ကူညီပေးကြသော Ko Phyo Nyinyi, Ko Aung Thiha တို.အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Samsung ဖုန်း Font Style ပြသနာ
Samsung ဖုန်းတွေ Version 5.1.1 ကနေစပြီး တစ်ချို့ဗားရှင်းအမြင့်တွေ Font Style ကနေ မြန်မာဖောင့်ချိန်မရတော့ပဲ Uninstall ပဲ တောင်းနေတဲ့ ပြသနာတွေ...
AndroVid Pro Video Editor - For Android
Android စက်ရုပ်သမားတွေအတွက် Video Editor လုပ်တာဝါသနာပါသူများအတွက် AndroVid Pro Video Editor လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗွီဒီယိုဖော်မက်ချိန်း...